SOMALITALK - MARAAKIIB
Sanadkii 1987dii waxaa mashruuca lagu wareejiyey Wasaarada Arrimaha Dibedda (oo waagaa wasiir uu ka ahaa Cabdiraxmaan Jaamac Barre) sida dhamaan mashaariic kale oo dawlada Talyaaniga ay nagu caawin jirtey hirgalintooda waqtigii Wasiirkii koowaad Talyaaniga ee hore Signor Bettino Craxi. Isla sanadkaas waxaa Munye Said Omar loo magacaabay Maareeyaha Guud ee mashruuca oo magaca loo beddeley “SHIFCO”. Haddaba, muddadii ay u dhexeysay sanadihii 1987 iyo 1990kii, Munye wuxu kaloo isku hayey xubin guddi isku dhaf ah oo u xilsaarnaa maamulka macaawanadii Talyaaniga(ItalianAid-Fund), iyo Guddoomiyaha Shirkadda (Zootechnic -- Afgoi) ee “Gisoma” oo ay ka mid ahayd isla mashaariicdaas. Dhamaan jagooyinkaas kala duwan ee sarsare uu Munye dalka u hayey muddadii ka horeysay dagaalkii sokeeye, ma ahayn kuwo uu ku muteystey karti iyo khibrad shaqo oo gaar ahaan u lahaa ee waxay iska ahaayeen kuwo ugu wacnaayen duruuf oo marka ay ka jirtey dalka ayadoo raggii laysku haleynayey xagga maamulka xafiis-yada dawlada ay dalka isaga tageen. Duruuftaas ka sokow, wuxuu kale Munye ka faa’idaystey dadaal uu galey walaalkiisa oo mas’uul weyn ka ahaa ciidamada dalka, si uu u xaqiijiyo himiladiisa. Runtii, ilaa sanadkii 1985tii Munye wuxuu shaqaale ka ahaa shirkad Talyaani ah oo qandraas ay ku heshey dhismo dhuumaha mara wasaqda oo loo sameyn jirey caasimada Muqdisho. Shaqadaas wuxu bilaabay sanadkii 1983dii kaddib markii uu ka qalin jabiyey jaamacad ku taalo magaalada Bologna ee dalka Talyaaniga, takhasuskiisuna uu ahaa dhismaha dhuumaha as (Hydraulic engineer).
Haddii aan u soo laabto Maamulka mashruuca Shifco, waxaa xusuus mudan in laga bilaabo sanadkii 1987dii ilaa dhammaadka sanadkii 1990kii hawsha mashruuca si isdaba- joog ah bay u socotey. Marka u horeysa, waxaa hawshaas bilaabay saddexdii maraakiib oo dib loo hagaajiyey; kuwaasoo muddo ku dhow labo sano ay xoornaayeen dekedda Muqdisho. Muddo gaaban ka dib mashruuca waxaa lagu kordhiyey labo maraakiib kale oo kalluumaysi ah iyo hal markab weyn oo qaboojiye ah. Dhamaan 5 maraakiib kalluumaysi (oo midkiiba tankiisu yahay 330 ton) iyo markabka qaboojiyaha ah (oo tankiisu yahay 3500 ton) qiimaha lagu soo sameeyey wuxuu gaarey ilaa US dollar $137 milyan. Ugu dambeystii, mashruuca Shifco waxaa hawshiisa lagu balaariyey warshadda SMP ee Kisimayo sanadkii 1989kii. Hase yeeshee, dhamaan dadaalkaas wuxu noqday hal bacaad lagu lisey; taasoo ugu wacnayd in la jideystey boobka dakhliga mashruuca. Tusaale, waxaa Maamulka Shifco loo furi jirey L/C (letter of credit) oo qiima hiisu ahaa ilaa afar milyan oo doolarka mareekanka ah oo ku saabsanaa dhoofin kalluun oo nooc kasta leh kaddiib markii uu xirmo xilli kalluumaysi oo sida caadadu ahayd wuxuu soconaayey ilaa 75 beri; hase ahaatee, lacagta ay ka soo noqon jirtey dhoofintaa kama ay badnayn toban kun doolar iyo liis dheer oo lagu sheegi jirey kharajyadii xilliga. Liiskaas waxaa laga soo diyaarin jirey dalka Talyaaniga oo laga soo gadan jirey dhamaan waxa ay u baahan yihiin maraakiibta ha ahaatee raashiin iyo alaabta kale. Xafiiska Ilaalinta Sarrifka ee Bankiga dhexe wuxuu liiska ku oggolaan jirey warqad ay qortey Wasaaradda Arrimaha Dibedda; taasoo lagu ogeysiinayey in mashruuca tijaabo uu ku jiro. Sidaa daraadeedna, looga baahan yahay bankiga in uu fududeeyo hawshiisa. Waxaa la wada ogaa in kharajyada ku baxa xilliga kalluumaysiga uu ahaa lacag dhan US dollar milyan iyo bar.
Ilaria Alpi... DILKII SOOMAALIYA
Gabadhaas oo wariye talyaani u dhashey ay ahayd, waxay dalka Somalia u timid inay dabagasho hal billion oo liraha talyaaniga ah oo uu ka maqnaaday macaawanadii Talyaaniga(Italian Aid-Fund) ugu talo galey dalka Somalia, iyo inay wax ka qorto dhaqdhaqaaqa maraakiibta kalluumaysiga somaliyeed oo tumaayey in loo adeegsado xagga tahriib (kontrabando) hub oo laga mamnuucay dalka Somalia. Haddaba, dilkaa awgii, waxaa dalka Yemen uu yimid guddi uu u horkacaayey garyaqaan u xilsaaranaa qadiyada dilka, wuxuna Eng. Munye oo markaa farta lagu fiiqaayey, iyo nin kale oo isagana u dhashey Somali lana yiraahdo Abdullahi King ka wareystey arrinta dilka. Si kastaba arrinta ha ahaatee, lama soo sheegin wax eedeyn ah loo soo jeediyey labadaa nin, Eng.Munye iyo Abdullahi King, oo la xiriira dilkaa. Hase ahaatee, maxkamad ku taalo dalka Talyaaniga waxay xabsi abadi ku xukuntey nin u dhashey dalka Somalia oo ahaa darawalkii gaarigii ay saarnaayeen nimankii dil-ka geystey.
Haddii aan u soo laabto arrimaha la xiriira dhaqdhaqaaqa maraakiibta kalluumaysiga somaliyeed 14 sano ugu dambeeyey, waxaan ugu horeyntii halkan ka sheegaa in ilaa dhammaadkii sanadkii 1992dii maraakiibtaas oo ay adeegsan jireyn dekedda Caden ee dalka Yemen waxaa wakiil ka ahaa nin la yiraahdo Jacfar Badr kaddib markii uu baaba’ey heshiiskii Shifco-Malit. Bishii May ee sanadkii 1993dii, Eng. Munye wuxuu heshiis la galey shirkadda Panapesca oo ah shirkadda ugu weyn dalka Talyaaniga oo ay ka ganacsato kalluunka, waxaana iska leh nin la yiraahdo Panati. Taariikhdaas waxii ka dambeeyey ayaa, si rasmi ah, dalka Yemen ugu bilaabatey hawsha Maamulka Shifco la xiriira dhoofinta kalluunka. Isla taariikhdaas, waxaa Munye uu go’aansaday inuu shaqada ka racdeeyo dhamaan shaqaalihii soomaalida ahaa oo wax ka maamuli jirey hawlaha Shirkadda ha ahaadeen kuwo u qaabilsanaa xisaabaadka iyo ha ahaadeen kabtanadii waayo-arag u lahaa wadida maraakiibta sida kabtan Osman Biit, kabtan Mohamed Mooge, iyo kabtan Ahmed Mao; kuwaasoo lagu beddeley shaqaale talyaani ah iyo kuwo kale oo ay is-xigaan iyaga iyo Munye. Hubaal, in go’aankaas Eng. Munye uu ku damacsanaa inuu ka faa’idaysto dawlad la’aanta ka jirtey waddanka hooyo si bal ay u suurtowdo in uu halkii ka sii wado dhacii loo geysan jirey dakhliga maraakiibta. Hase, ahaatee, waxaa la wada ogsoon yahay in badda somaliyeed sanadkiiba laga soo saaro ilaa 12 kun ton oo kalluun ah, oo noocyo badan leh, loona dhoofiyo dalka talyaaniga. Runtii, saddexdii biloodba mar maraakiibta kalluumaysiga waxay markabka weyn ee qaboojiyaha ah kalluun culeyskiisu dhan lagu qiyaaso 2500-3000 ton ayadoo wareejintaa lagu sameeyo dekedda Aden. Intaa waxaa dheer, kalluun kale oo ah nooca loo yaqaano “Africa fish” oo Maamulka Shifco uu u dhoofiyo dalal-ka khaliijka, gaar ahaan, Sacuudiga. Haddaba, dakhliga Maamulka Shifco waxaa lagu qiyaasaa ilaa US dollar 5-6 milyan oo la helaayo xilli kasta ee kalluumaysi ah; sanadkiina dakhligaa wuxuu gaaraa ilaa US dollar 20-24 milyan ayadoo aan xisaab lagu darin ijaarka laga helo markabka qaboojiyaha.
Qormada Labaad... bangiyadii Qaranka Soomaaliya